Fanatsarana ny sidina anabakabaka: Tosika ho an’ny fizahantany | déliremadagascar
Fanatsarana ny sidina anabakabaka: Tosika ho an’ny fizahantany
Socio-eco	 5 juillet 2018 R Nirina
Tombony ho an’ny mpandraharaha miantsehatra amin’ny tontolon’ny fizahantany ny fananganana ny kaompaniam-pitaterana anabakabaka vaovao Tsaradia. Tafiditra oa anatin’ny fiarahamiasa stratejika eo amin’ny kaompaniam-pitaterana anabakabaka eto an-toerana sy ny Air Austral izy ity ho fanarenana ny orinasa Air Madagascar. Eo ambany fifehezan’ny filankevim-pitantanan’ny Air Madagascar ny kaompania vaovao Tsaradia. Sidina anatiny natao hitatitra ny mpandeha fiaramanidina amin’ireo faritra eto Madagasikara no tolotra omen’ny Tsaradia. Teboka mampiavaka ny kaompania Tsaradia ny hatsaran’ny kalitao ny “service”, ny fahamarinam-potoana ary ny fitomboan’ny isan’ny sidina isan-kerinandro, araka ny fanazavan’ny Tale jeneralin’ny Tsaradia nandritra ny fanokafana tamin’ny fomba ofisialin’ ny biraon’ity kaompania vaovao ity, teny amin’ny « Tour Ankorondrano » ny 04 jolay 2018.
Nanatrika io lanonana io ekipan’ny vondrona Sipromad izay notarihin’ny Tale Kabinetrany, Tiana Rasamimanana. Orinasa miasa amin’ny sehatry ny indostria sy fizahantany no mivondrona amin’ny Sipromad. “Mahafaly anay ny fisafidianan’ny kaompania nasionaly Tsaradia ny Tour Ankorondrano. Rehefa mihatsara ny fizahantany dia mamporisika ny mpandraharaha hampiasa vola sy hanangana foto-drafitr’asa izany”, hoy i Tiana Rasamimanana. Mbola nampatsiahivin’ny tale kabinetran’ny Sipromad hatrany fa raha tiana hiroborobo ny fananganana foto-drafitr’asa eto Madagasikara dia mila ampian’ny fanjakana tosika ireo mpandraharaha. Ohatra amin’izany ny fampihenana ny hetra alohan’izy ireo. Marihina fa ny vondrona Sipromad no nanamboatra ny Tour Ankorondrano tamin’ny taona 2009.